News Collection: यौन चलचित्रमा नेपाली ? भ्रामिक समाचार
अमेरिकामा तयार गरेको एक निलो चलचित्रका नायिकाले आफूलाई नेपाली भनेर परिचय दिएकी छिन्। दीप शिखा नाकी उक्त महिलाले माया नामबाट निलो चलचित्रमा अभिनय गरेकी हुन। तर वास्तवमा उनी नेपाली नभएर भारतिय मुलकी रहेछिन्। उनले नेपाली भनेर किन परिचय दिएकी हुन तथा नेपाली पत्रिकाहरूले पनि उनको सो भनार्इ लार्इ निकै प्राथमिकता दिएर किन प्रकाशनमा ल्याएको थियो? सो भने निकै दुखदायी रहेको छ।
अमेरिकामा पोर्न स्टार हुनमा कुनै शर्म नरहेको तथा यस्तो चलचित्रबाट निकै कमार्इ हुने भएबाट मानिसहरू यस्ता चलचित्रमा अभिनय गर्ने गर्दछन्। अमेरिकाका युवापुस्ताहरूलार्इ पोर्न स्टार बन्न कुनै आपत्ती छैन। तर नेपाली समाजका लागि यो निकै नै ग्लानिनतापुर्वक कूरा हो। यस्तो समयमा कुनै भारतिय नारीले नेपाली भनेर यौन चलचित्रमा कार्य गर्दछिन भने त्यसको बिरोध जरूरी छ।